LA OGAADAY: Wixii Uu Sir Alex Ferguson Telefoon Uga Sheegay Bartilmaameedka Man United Ee Harry Magurie Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Wixii Uu Sir Alex Ferguson Telefoon Uga Sheegay Bartilmaameedka Man United Ee Harry Magurie Oo La Ogaaday.
Tababarihii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayaa la ogaadya in uu telefoon ka wacay xidiga hadda bartilmaameedka u ah kooxdiisii hore ee United ee Harry Maguire.
Sir Alex Ferguson ayaa sanado badan soo maamulay kooxda Manchester United wuxuuna shaqada ka fadhiistay sanadkii 2013 kii laakiin tan iyo markii uu hawlgabay waxay United noqotay koox hoos u sii dhacaysay.
Waxa uu Sir Alex Ferguson ahaa shaqsi si fiican u fahmi jiray nooca ciyaartoyda soo baxyaa ee tayada yeelan kara wuxuuna inta badan ahaa mid ku dhiiran jiray in uu ciyaartoyda soo barbaariyo ama uu talo fiican oo ay horumar ku sameeyaan siiyo.
Waxaa xog cusub laga helay wixii uu telefoonka uga sheegay xidiga ay Man United hadda 70 milyan gini ku dalbatay ee laga soo diiday ee Harry Maguire oo ka tirsan kooxda Leicester City.
Sida uu shaaciyay wariyaha Andy Mitten, waxa uu Sir Alex Ferguson telefoon ka wacay Harry Maguire sanadkii 2011 kii markaas oo ay kooxaha da’yarta Man United iyo Sheffield United ay isku arkeen kulankii FA Youth Cupka.
Harry Maguire ayaa markaas ka tirsanaa kooxda da’yarta Sheffield United waxaana da’yarta Man United ee waqtigaas ku jiray Pual Pogba iyo Jesse Lingard iyada oo kooxda da’yarta United guul gaadhay.
Laakiin kadib kulankan waxa uu Sir Alex Ferguson telefoon ka wacay Harry Maguire wuxuuna usheegay in uu madaxa sare u qaado oo uu shaqada adag sii wato, wuxuuna Sir Alex u balan qaaday Maguire oo waqtigaas da’yar ahaa in haddii uu taladiisa qaato uu maalin maalmaha ka mid ah kooxaha ugu sareeya u ciyaari doono.
Sida uu Andy Mitten xogtan ku sheegay waxa uu wicitaankii Sir Alex Ferguson kalsooni siiyay Harry Maguire kaas oo bilaabay in uu qaato talada uu ka helay ruug cadaaga reer Scotlland, wuxuuna ugu danbayn diyaar u yahay in uu riyadiisa kooxaha waa wayn ka rumeeyo.
Markii uu Harry Maguire kalsoonida ka helay in uu shaqsi muhiim u ah sida Sir Alex Ferguson telefoon ka helay waxa uu sameeyay tadadaal badan isaga oo ka soo dhex baxay kooxdii da’yarta ee Sheffield United.
Kadib waxa uu Harry Maguire ku biiray kooxda Hull City oo uu shaqo fiican ka soo qabtay isla markaana uu ku noday xidiga uu maanta yahay laakiin markii ay Hull herka labaad u dhacday waxa uu qiimo hoose ugu soo biiray Leicester City oo 90 milyan gini hadda ku qiimaynaysa.
Haddii uu Sir Alex Ferguson uu talo iyo dhiiro galin wayn siiyay Harry Maguire sanadkii 2011 kii, waxa uu hadda arkaaya Man United oo laga soo diiday dalab 70 milyan gini ah iyada oo lagu qasbayo in ay bixiyaan 90 milyan gini.